Xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee Barlamaanka oo maanta soo dhaweeyay Golaha Badbaado Qaran – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee Barlamaanka oo maanta soo dhaweeyay Golaha Badbaado Qaran
March 25, 2021 Hassan Istiila
Xildhibaanno dhowaan ku dhawaaqay Kutlada Badbaado Qaran ee labada Aqal ee Barlamaanka Federaalka oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdishu, ayaa soo dhaweeyay ku dhawaaqida Golaha Badbaado Qaran oo ay ku mideysanyihiin madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland, musharraxiinta mucaaradka iyo qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi.
Madasha ayaa la sheegay in ay u taagantahay badbaadinta dalka iyo dadka iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal ah sidii dalka ay uga dhici lahayd.
“Waxaan saxiixnay petition lagu cadaynayo mowqifka Kutlada Badbaado Qaran iyo sida dalka iyo dadka looga badbaadin lahaa qatarka ku soo fool leh. Waxaanan sidoo kale baaq u dirnay dadka Soomaaliyeed, Beesha Caalamka iyo Hay’adaha Dowliga ah ee kaalmeeya dowlada Soomaaliya”, ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad.
Waxaan sidoo kale uga dignay saraakiisha Farmaajo u adeegsanayo burburinta dalka ee ku tumanaya shuruucda dalka in aysan ciqaab la’aan noqon doonin hadii aysan ka waantoobin ficilada liddiga ku ah dimuquraadiyada iyo xasilloonida dalka”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Xildhibaannada ayaa uga dignay Gudoonka Barlamaanka inaan dalka gacantooda lagu burburin. Hormuudna aysan ka noqon mudo kordhinta sharci darada ah ee Farmaajo ka raadinayo Goleyaasha Barlamaanka, sida ay hadalka u dhigeen.
Qofkuu doono ha ahaadee, ma jirto qof eed tiri kara eedeysane gartiisu ay hortaalo maxkamad
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federalka oo maanta kulan yeelanaya